(ဥသြ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဥဩသည် ကျီးကန်းရှိရာတွင် နေလေ့ရှိသောငှက်မျိုး ဖြစ်ပုံရသည်။ တစ်ရပ်မှတစ်ရပ်သို့လည်း ပြောင်းရွှေ့ကာ နေထိုင်ပုံရသည်။ အတိအကျကား မပြောနိုင်ချေ။ ဥဩကို တနင်္သာရီတိုင်းတွင် မတ်လမှ ဇူလိုင်လ အတွင်း ပေါများစွာတွေ့ရ၍ ဩဂုတ်လမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း မတွေ့ရချေ။ ဒီဇင်ဘာမှ ဖေဖေါ်ဝါရီအတွင်း ဥဩငှက်အနည်း ငယ်မျှကိုသာ တွေ့ရလေသည်။
ကမ္ဘာ့သိပ္ပံပညာရှင်များကမူ ဥဩဆိုသောအမည်သည် ဥရောပတိုက်ရှိလူသိများသော ငှက်မျိုးစိတ်အချို့၏ အော်သံကို အစွဲပြု၍ ထိုငှက်များကို ဥဩဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့လုံးခြမ်း အတွင်း၌ ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂ဝဝ ခန့်ရှိ သည်။ ထိုငှက်များ၏အရောင်မှာ ညိုမွဲမွဲဖြစ်သည်။ ဥရောပ တိုက်နှင့် အာရှတိုက်ရှိ ဥဩငှက်များ၏အရောင်မှာမူ လှပကြ သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ဥဩငှက်သည် နွေကူးရာသီစောစောပိုင်း တွင် ရောက်ရှိလာပြီးလျှင် များသောအားဖြင့် ဩဂုတ်လတွင် ထိုနိုင်ငံမှထွက်ခွာကြ၍ တောင်အာဖရိကတိုက်တွင် ဆောင်း ရာသီအတွင်း၌ နေထိုင်ကြသည်။
ဥဩသည် ဥကို အခြားငှက်များ၏အသိုက်များအတွင်း ၌ သွား၍အုလေ့ရှိသည်။ ထိုဥပေါက်သောအခါ ဥဩငှက် ကလေးသည် သူ့အားကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားသော ငှက်၏ဥ ကိုဖြစ်စေ၊ ငှက်ငယ်ကလေးကိုဖြစ်စေ အသိုက်မှအောက်သို့ ချ ပစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသော ငှက် ယူလာသမျှအစာကို တစ်ကောင်တည်းက စားနိုင်သဖြင့် မကြာမီ အတွင်း၌ပင် ငှက်ကြီးများထက်ကြီးထွားလာလေသည်။ ဥဩ ငှက် မျိုးစိတ်အချို့ကသာ အသိုက်များကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ကြ သည်။
↑ Daniels,RJR (1984). "Eye color in koels.". Newsl. for Birdwatchers 24 (9-10). ↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၅)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥဩ&oldid=281030" မှ ရယူရန်	ကဏ္ဍ: ငှက်	လမ်းညွှန်မီနူး
অসমীয়াБългарскиবাংলাCatalàCebuanoČeštinaދިވެހިބަސްEnglishEsperantoEspañolEuskaraFrançaisગુજરાતીहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItalianoമലയാളംमराठीBahasa MelayuNederlandsଓଡ଼ିଆਪੰਜਾਬੀپنجابیРусскийसंस्कृतम्සිංහලSvenskaதமிழ்ไทยTiếng ViệtWinaray中文	လင့်ခ်များကို တည်းဖြတ်ရန်	ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက် ၁၂:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။